သိန္း 300 မွ သိန္း 400 ထိ အလုံမြို့နယ်ရှိရောင်းရန်တိုက်ခန်းများ
စက်တွင်းလမ်းတိုက် ခန်း၆လွှာ ရောင်း မည်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10060940 အတွက် အာရှ အကျိုးဆောင် သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9920241 အတွက် Aung Ta Khit Real Estate Service. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9917400 အတွက် အာရှ အကျိုးဆောင် သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9914491 အတွက် ဖြိုးသစ္စာ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9901545 အတွက် Zaluckpwint Real Estate Services Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9899640 အတွက် Zaluckpwint Real Estate Services Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9897736 အတွက် Zaluckpwint Real Estate Services Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9836979 အတွက် အကျိုးတော်ဆောင် သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9768669 အတွက် ဖြိုးသစ္စာ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9731551 အတွက် Ko Min Min အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်